Iimeko eziPhezulu zokuThengiswa - Toolsdecuisine.com
IIMITHETHO EZIKHULU NEMITHETHO YOKUTENGA NOKUSEBENZISWA
Le webhsayithi isebenza yi-Outilsdecuisine.com. Kule ndawo, imiqathango ethi "thina", "us" kunye "yethu" ibhekisela kwi-Kitchenware.com. I-CookingStyle.com inikeza le website, kuquka lonke ulwazi, izixhobo kunye neenkonzo ezifumanekayo kuwe, uMsebenzisi, ngokuxhomekeke ekuwamkelekeni kwakho konke, imiqathango, imigaqo-nkqubo kunye nezaziso ezichazwe apha. apha.
Ngokutyelela kule sayithi kunye / okanye ngokuthenga enye kwiimveliso zethu, uzibandakanya "Inkonzo" kwaye ndivuma ukubopheleleka la magama alandelayo kunye nemiqathango ( "Imibandela", "IiMeko gabalala ukuthengiswa kunye Sebenzisa ' , "Iimeko"), kubandakanywa nemigangatho eyongezelelweyo, iimeko kunye nemigaqo-nkqubo ekubhekiswe kuyo apha kunye / okanye kufumaneka kwi-hyperlink. Le Imigaqo nemiqathango ukuthengiswa kunye Sebenzisa isebenza kubo bonke abasebenzisa lo site, kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kubasebenzisi ukukhangela isiza, ezo abathengisi, abathengi, abarhwebi, kunye / okanye abanomxholo.
Kucelwa ufunde le Migaqo yokuThengisa kwaye Sebenzise ngokucophelela ngaphambi kokufikelela okanye ukusebenzisa iwebsite yethu. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yale sayithi, uyavuma ukuba ubophelelwe yiMigqaliselo neMibandela yokuThengiswa nokuSebenza. Ukuba awuvumelani nayo yonke imimiselo kunye nemimiselo yesi sivumelwano, akufanele ufikelele kwiwebhusayithi okanye usebenzise iinkonzo ezibonelelwe khona. Ukuba le Migaqo neMibandela yokuThengiswa kunye nokuSebenza ibonwa njengesingeniso, ukwamkelwa kuya kugqitywa kule Migaqo neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenza.
Zonke izixhobo ezintsha kunye nezixhobo eziza kudibaniswa kamva kule venkile ziyakuxhomekeka kule Miqathango neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenza. Unokukhangela inguqu yakutshanje yeMibandela yokuThengisa kunye nokuSebenzisa nanini na kweli khasi. Sigcina ilungelo lokuhlaziya, ukutshintsha okanye ukubuyisela nayiphi na inxalenye yale Migqaliselo yokuThengiswa kunye nokuSebenzisa ngokuthumela izibuyekezo kunye / okanye utshintsho kwiwebhusayithi yethu. Kuwuxanduva lwakho ukujonga eli phepha rhoqo ukuze ubone ukuba kukho na utshintsho olwenziweyo. Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kwiWebhusayithi okanye ukufikelela kwakho emva kokuba ukuthunyelwa kwanoma yintoni utshintsho kukuvumela kwakho ukutshintsha.
Isitolo sethu senziwa kwi-Shopify Inc. Basinika isicwangciso se-e-commerce esivumela ukuba sikuthengise iimveliso kunye neenkonzo zethu.
ICANDELO 1 - IMITHETHO YOKUSEBENZISWA KWENKONZO YETHU YENKONZO YETHU
Ngokwamkela le Migaqo neMibandela yokuThengiswa nokuSebenza, umela ukuba usufikelele kwixesha eliyininzi kwilizwe lakho, urhulumente okanye iphondo lokuhlala, kwaye usinike imvume yakho ukuvumela nawuphi na umntu oneminyaka yobudala Umncinci wakho uxanduva lokusebenzisa le website.
Ukusetyenziswa kweemveliso zethu nangayiphi na into engekho mthethweni okanye engagunyaziswanga inqatshelwe, kwaye akufuneki, ngokubhekiselele ekusebenziseni iNkonzo, ukuphula imithetho yegunya lakho (kubandakanywa kodwa kungaphelelanga copyright).
Akufanele udlulisele iimpompo, ii-virus okanye nayiphina imigaqo yendalo.
Nakuphi ukuphulwa okanye ukuphulwa kweMigomo neMibandela yokuThengiswa kunye nokuSebenza kuya kubangela ukupheliswa okufutshane kweeNkonzo zakho.
Sigcina ilungelo lokukhanyela ukufikelela kwiinkonzo kunoma ubani nangaliphi na ixesha naziphi na izizathu.
Uyakuqonda ukuba umxholo wakho (ngaphandle kweenkcukacha zekhadi lakho lesikweletu) ungadluliselwa ngendlela engabhalwanga, kwaye oku kuthetha (a) ukudluliselwa kumanethiwekhi amaninzi; kwaye (b) utshintsho ukuthobela kunye nokulungelelanisa neemfuno zobugcisa zokuxhuma amanethiwekhi okanye izixhobo. Ulwazi lwekhadi lokuthenga ngetyala luhlale lubethelwe ngexesha lokudluliselwa kwiinqununu.
Uyavuma ukuba ungazalisi, uphinde uphinde uhlawule, uhlawule, uthengise okanye usebenzise nayiphi na iNkonzo okanye usebenzise iNkonzo, okanye nawuphi na ukufikelela kwiNkonzo okanye uqhagamshelwano kwiwebhusayithi, apho iNkonzo inikwa khona, ngaphandle kwemvume kubhaliweyo phambi kwethu.
Izihloko ezisetyenziswe kwesi sivumelwano zibandakanyiwe ukulungelelanisa, kwaye aziyi kuphelisa okanye zichaphazele ezi Migqaliselo.
ICANDELO 3 - UKUVUMA, UKUQHUBA OKUQHELEKILEYO NENGCACISO ENGCACISO
Asinabangela ukuba ulwazi olukhoyo kule ndawo aluchanekanga, luzalisekile okanye lusesikhathini. Okubhalwe kule sayithi inikwa ukulungiselela iinjongo zokunika ulwazi kuphela kwaye akufunekanga ibe umthombo wakho kuphela ulwazi ekwenzeni izigqibo ngaphandle ngokukhangela kwimithombo oluchanekileyo ngolwazi, epheleleyo ngakumbi yaye yahlaziywa. Ukuba unquma ukuthembela kumxholo kule ndawo, wenza njalo kwingozi yakho.
Le sayithi inokuba neenkcukacha ezithile zangaphambili. Olu lwazi oludlulileyo, ngohlobo lwalo, aluhambelanga kwaye lubonelelwa ngenjongo yolwazi kuphela. Sigcina ilungelo lokuguqula umxholo weli sayithi nanini na, kodwa asiyibopheleleko yokuhlaziya ulwazi kwiziko lethu. Uyavuma ukuba ngumsebenzi wakho ukubeka iliso utshintsho kwisayithi lethu.
ISIHLOKO 4 - UKUSEBENZISWA KWEENKONZO NEEMISEBENZI
Amaxabiso emveliso yethu ayatshintsha ngaphandle kwesaziso.
Sigcina ilungelo nangaliphi na ixesha ukuguqula okanye ukuyeka iNkonzo (kunye nayiphi na inxalenye okanye umxholo weNkonzo) ngaphandle kwesaziso nangaliphi na ixesha.
Asiyi kuba noxanduva kuwe okanye nawuphi na umntu wesithathu kunoma yintoni na utshintsho lwexabiso, ukumiswa okanye ukucinywa kweNkonzo.
Imveliso ethile okanye iinkonzo zinokufumaneka kuphela kwi-intanethi kwiwebhusayithi yethu. Ezi mveliso okanye iinkonzo zinokufumaneka ngokulinganiselwe kwaye zinokubuyiselwa okanye zitshintshwe kuphela ngokuhambelana noMgaqo-nkqubo Wokubuyisa.
Senze konke okusemandleni ethu ukubonisa ngokucacileyo imibala nemifanekiso yemveliso yethu ebonakalayo kwisitolo sethu. Asikwazi ukuqinisekisa ukuba ukubonakalisa imibala ngeskrini kwikhomputha yakho kuya kuchaneka.
Sigcina ilungelo, kodwa asibophekile ukwenza njalo, ukunciphisa ukuthengisa kweemveliso okanye iinkonzo zethu kunoma yimuphi umntu, indawo yendawo okanye igunya. Singawusebenzisa eli lungelo kwiimeko ezithile ngeemeko. Sigcina ilungelo lokunciphisa ubungakanani bemveliso okanye inkonzo esinikelayo. Zonke iinkcazo zemveliso kunye namanani emveliso ziya kutshintshwa naliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso kwengqiqo yethu kuphela. Sigcina ilungelo lokuyeka ukunikezela ngemveliso nanini na. Nasiphi na isibonelelo senkonzo okanye umkhiqizo owenziwe kule ndawo ayikho indawo apho umthetho uwenqabela khona.
Asiqinisekisi ukuba umgangatho weemveliso, iinkonzo, ulwazi, okanye olunye uhlobo oluthengiweyo oluthengiweyo okanye oluthengiweyo luya kuhlangabezana neemfuno zakho, nokuba akukho mpazamo kwiNkonzo iya kulungiswa.
ICANDELO 6 - UKUVUMELWA KWE-INVOICING AND ACCOUNT INFORMATION
Sigcina ilungelo lokulahla nayiphi na umyalelo obekayo nathi. Sinokuthi, ngokwengqiqo yethu kuphela, sinciphise okanye sikhuphe inani elithengiweyo ngomntu ngamnye, ikhaya okanye umyalelo. Ezi zithintelo zingabandakanya iilawulwe zibekwe okanye zivela kwiakhawunti enye yamakhasimende, enye ikhadi lekhredithi, kunye / okanye i-oda ezisebenzisa enye idilesi yokuthengisa kunye / okanye yokuthumela. Kwimeko apho siguqulela umyalelo okanye ukuwukhansela, sinokuzama ukukukwazisa ngokuqhagamshelana nawe kwi-imeyile kunye / okanye idilesi yokubambisa / inombolo yefowuni enikezelwa ngexesha umyalelo ubekwe. Siyalondoloza ilungelo lokunciphisa okanye ukuvalela iilawulithi, ekugwebeni kwethu kuphela, zingabonakala zivela kubahwebi, abathengisi okanye abahambisa.
Uyavuma ukubonelela nge-date-to-date, ukuzaliswa okupheleleyo nechanekileyo kunye nolwazi lwe-akhawunti kuzo zonke i-oda ezibekwe kwisitoreji sethu. Uyavuma ukuhlaziya ngokukhawuleza i-akhawunti yakho kunye nolunye ulwazi, kuquka idilesi yakho ye-imeyile, iinombolo zekhadi lesikweletu kunye nemihla yokuphelelwa yisikhathi, ukuze sizalise ukuthengiselana kwakho kwaye siqhagamshelane nawe njengoko kuyimfuneko.
Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi, nceda ubone iNkqubo yethu yokubuyisela.
Sinokukunika ukufikelela kwizixhobo zenkampani yesithathu apho singalandeli, ukulawula okanye ukuthintela.
Uyavuma kwaye uyavuma ukuba sinika ukufikelela kwezixhobo ezinjalo "njengoko kunjalo" kwaye "zikhoyo" ngaphandle kwanoma yimaphi imirhumo, iimpawu okanye iimeko zaluphi na uhlobo kwaye ngaphandle kwemvume. Asiyi kuba noxanduva lokusemthethweni olubangelwa okanye oluhlobene nokusetyenziswa kwezixhobo zenkampani yesithathu.
Ukuba usebenzisa izixhobo zokuzikhethela ezinikezelwa kwisayithi, wenza njalo kumngcipheko wakho nangokwakho ukuqonda, kwaye kufuneka uqhagamshelane nemiqathango phantsi kwezi zixhobo ezibonelelwa ngababoneleli benkampani yesithathu.
Singakwazi kwakhona ukunikela ngeenkonzo ezintsha kunye / okanye iinkalo ezintsha kwiziko lethu (kuquka amathuluzi amatsha kunye nezibonelelo). Ezi zixhobo ezintsha kunye neenkonzo ziya kunikwa phantsi kwezi Migangatho neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenza.
ICANDELO 8 - IINGXENYE ZESITHATHU ZAMASEBENZI
Umxholo othile, iimveliso kunye neenkonzo ezifumaneka kwiNkonzo yethu zinokubandakanya izinto ezivela kumntu wesithathu.
Iziqhagamshelwano ezisuka kumalungu esithathu kule ndawo zingakuthumela kwiiwebhusayithi zangaphandle ezingabambisene nathi. Asikho mfuneko yokuhlaziya okanye ukuvavanya umxholo okanye ukuchaneka kwezi ziza, kwaye asiyikuvuma okanye sithatha nayiphi na imbopheleleko kuyo nayiphi na into, iwebhusayithi, imveliso, inkonzo okanye enye into efikelelekayo okanye ukusuka kulezi ziza zamasayithi.
Asinabo uxanduva lokulahleka okanye umonakalo ohlobene nokuthengwa okanye ukusebenzisa nayiphi na impahla, iinkonzo, izibonelelo, umxholo, okanye nayiphi na enye into eyenziweyo ngokuphathelele kwiwebhusayithi yebambini. Kucelwa ufunde ngokucophelele imigaqo kunye nemisebenzi yabasithathu kwaye qinisekisa ukuba uyawaqonda ngaphambi kokuba uhlanganyele kuyo nayiphi na intengiso. Izikhalazo, amabango, iinkxalabo, okanye imibuzo ephathelele iimveliso zala maqela angaphandle kufuneka angeniswe kula maqela athathu.
ISIHLOKO 9 - IMIBUZO, IINKCUKACHA NAMANYE IZIPHUMO ZABASEBENZI
Ukuba, kwisicelo sethu, uthumele umxholo othile (umzekelo, ukuthatha inxaxheba kwimincintiswano), okanye ukuba ngaphandle kwesicelo esivela kuthi, uthumele iingcamango zobugcisa, iziphakamiso, iziphakamiso, izicwangciso okanye ezinye izinto, intanethi okanye nge e-mail, iposi, okanye ngenye indlela (ngokuhlangeneyo, "izimvo"), uya kusinika okulungileyo, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwemiqathango, hlela, ikopi, ukushicilela, wabele , ukuguqulela kunye nokusetyenziswa kwezinye izinto kunye naluphi na unxibelelwano naluphi na amazwana osithumelayo. Asikho kwaye asiyi kufunwa (1) ukugcina imfihlo yezimvo; (2) ukuhlawula umvuzo kumntu naziphi na izimvo ezinikeziwe; (3) ukuphendula kumazwana.
Sinakho, kodwa akukho isibopho lokwenza oko, ukubeka iliso, hlela okanye susa isiqulatho ukuba isigqibo ngokwengqiqo lwethu, ukuba ube semthethweni, ekhubekisayo, ukusongela, libelous, isithunzi, imifanekiso yamanyala, ezingcolileyo okanye ngenye indlela ezingamkelekanga, okanye iphula nayiphi na ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye ezi Terms of ukuthengiswa kunye Sebenzisa.
Uyavuma ukubhala izimvo ezingahambisani namalungelo abantu besithathu, kubandakanywa amalungelo, iimpawu zorhwebo, ubumfihlo, ubuntu, okanye amanye amalungelo abantu okanye amalungelo. Nawe uyavuma ukuba izimvo zakho aziyi kuba semthethweni, isithunzi, ekhubekisayo okanye ezingcolileyo, yaye musa ayiqulathanga iintsholongwane kwikhompyutha okanye ezinye isoftwe eyingozi eliza kubachaphazela ngayo nayiphi na indlela esebenza ngayo iNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi ehambelana nayo. Ungeke usebenzise idilesi ye-imeyile yamanga, wenze ngathi ungomntu ongekho, okanye uzame ukusilahlekisa kunye / okanye abantu besithathu malunga nomthombo wezimvo zakho. Unembopheleleko ngokupheleleyo kuzo zonke izimvo oziposayo kunye nokuchaneka kwazo. Asinakuthatha uxanduva kwaye siyakulahla nayiphi na ukuzibophezela kunoma ziphi na izimvo oziposayo okanye ukuba nayiphi na enye inxalenye yesithathu ibhicilela.
Ukungenisa ulwazi lwakho lomntu kwisitoreji sethu lulawulwa nguMgaqo-nkqubo Wobumfihlo. Cofa apha ukujonga iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo.
ICANDELO 11 - I-ERRORS, INACCURACIES AND MISSIONS
Kukho ukufumana ulwazi oluthile kwiziko lethu okanye kwiNkonzo enokuthi iqulethe iimpazamo ze-typographical, ukungacaciswanga okanye ukuchithwa okungahambelana nokuchazwa kwemveliso, amanani, ukukhushulwa, ukunikezelwa, iintlawulo ukuthunyelwa, ixesha lokuhambisa nokufumaneka. Sigcina ilungelo lokulungisa nayiphina impazamo, ukungalungi, ukungaphumeleli, nokutshintsha okanye ukuhlaziya ulwazi okanye ukukhansela imiyalelo, ukuba nayiphi na inkcazelo kwiNkonzo okanye nakweyiphi enye idibanisayithi ehambelana nayo ayilungile, kwaye , nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso (kubandakanywa emva kokubeka umyalelo wakho).
Asikho phantsi koxanduva lokuhlaziya, ukuguqula okanye ukucacisa ulwazi kwiNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi ehambelana nayo, kubandakanywa kodwa ingaphelelwanga kwimiba yentengo, ngaphandle kohlobo olufunwa ngumthetho. Akukho mhla wokumiselwa kokuhlaziywa okanye ukuhlaziywa kwiNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi ehambelanayo kufuneka ithathelwe ingqalelo ekugqibeleni ukuba ulwazi kwiNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi ehambelana nayo iguquliwe okanye ihlaziywe.
ISIHLOKO 12 - UKUSEBENZISWA KUNYE
Ukongeza nezithintelo ezibekwe Terms of ukuthengiswa kunye nokuSetyenziswa, ukuze ingabi ukusebenzisa isayithi okanye okubhalwe kuyo: (a) ngayo nayiphi na injongo engekho mthethweni; (b) ukukhuthaza abantu besithathu ukuba benze okanye bathathe inxaxheba kwizenzo ezingekho mthethweni; (c) ukwephula nayiphi na imimiselo yommandla okanye nayiphi na imithetho, yomthetho, wephondo, okanye yombuso, umthetho okanye umgaqo; (d) ukuphula umthetho okanye ukuphulwa kwamalungelo ethu epropati yolwazi okanye abo bantu besithathu; (E) okuxhaphaza, ukuxhatshazwa, baningcikiva, ukulimaza, ezonakalisa, ukunyelisa, phantsi, ubagonyamele okanye calula nabani ngokusekelwe isini, ubuni, inkolo, ubuhlanga, uhlanga, lo ubudala, imvelaphi yesizwe okanye ukukhubazeka; (f) ukungenisa ulwazi olungamanga okanye oludukisayo; (G) ukuba ukulayisha okanye amagciwane okanye naluphi na olunye uhlobo ikhowudi eyingozi eziya okanye ezino kusetyenziswa ukumela usebenzo okanye ukusebenza yeNkonzo okanye nayiphi na iwebsite ezinxulumene, elizimeleyo, okanye Internet; (h) ukuqokelela okanye ukulandelela ulwazi lomntu ngabanye; (i) ukugaxeka, ukuhlambalaza i-domain, ulwazi olude, ukuphequlula, ukuphonononga okanye ukuskena iwebhu (okanye nayiphina imithombo); (j) ngenjongo yokuhlambalaza okanye yokuziphatha okubi; okanye (k) ukuphazamisa okanye ukuphazamisa amanyathelo okukhusela eNkonzo yethu, nayiphina i-website okanye kwi-intanethi. Sigcina ilungelo lokuphelisa ukusetyenziswa kwakho kweNkonzo okanye nayiphi na idibanisayithi ehambelana nokuphulwa komsebenzi onqatshelwe.
ICANDELO 13 - UKWENZISWA KWAMARRANGANISI NOKUKHALWA KWEENKQUBO
Asikuvumeli okanye sigunyazisile ukuba ukusebenzisa kwakho iNkonzo kuya kuphazamiseka, ngokukhawuleza, kukhuselekile okanye akukho mpazamo.
Asikuvumeli ukuba iziphumo ezinokufumaneka ngokusetyenziswa kweNkonzo ziya kuchaneka okanye zithembeke.
Uyavuma ukuba ngezikhathi ezithile singasusa iNkonzo kwixesha elingenammiselo okanye ukukhansela iNkonzo nanini na ngaphandle kwesaziso kuwe.
Uyavuma ngokucacileyo ukuba ukusebenzisa kwakho iNkonzo, okanye ukungazikwazi ukusebenzisa iNkonzo, kusemngciphekweni wodwa. Inkonzo kunye nayo yonke imveliso kunye neenkonzo ezinikwe kuwe ngeNkonzo (ngaphandle kokuba zichazwe ngenye indlela ngathi) zinikwe "njengoko kunjalo" kwaye "zikhoyo" ukuba zisebenzise, ​​ngaphandle kokumela, ngaphandle iziqiniseko kanye ngaphandle nemiqathango yalo naluphi na uhlobo, ezichaziweyo okanye ezingachazwanga ngqo, ukuquka naziphi neziqinisekiso ezingachazwanga ngqo zokuthengiseka okanye zokuthengiseka, nokufanela injongo ethile, uqinile, isihloko kunye non-mthetho.
Outilsdecuisine.com, wethu abalawuli, amagosa, abasebenzi, amagatya, iiarhente, ikontrakhi, amava, abathengisi, abanikezeli nkonzo kunye layisense inokuba akukho iimeko kuba nabutyala ukwenzakala, ilahleko, ibango, okanye ngqo, ngokungathanga ngqo, okuyingozi, sazela, ekhethekileyo, okanye osisiphumo naluphi na uhlobo, kuqukwa kodwa kungalinganiselwanga kwilahleko yenzuzo, ingeniso, imali, iinkcukacha, iindleko zokuthengwa okanye nawuphi na umonakalo esifanayo ukuba isivumelwano, tort (nkqu kwimeko yokungakhathali), icala elibukhali okanye ngenye indlela, evela ekusetyenzisweni kwakho naziphi na iinkonzo okanye iimveliso kule nkonzo, okanye nawuphi na ibango olunxulumene nangayiphi na indlela ukusebenzisa kwakho Inkonzo okanye nayiphina imveliso, kuquka kodwa ingaphelelwanga kuyo nayiphina impazamo okanye ukungaphumeleli kuyo nayiphi na into, okanye nayiphina ilahleko okanye umonakalo waluphi uhlobo Ukusetyenziswa kweNkonzo okanye nayiphi na into (okanye imveliso) yashicilelwe, idluliselwa, okanye yenziwe enye ngeNkonzo, nangona uye waxwayiswa ukuba kungenzeka. Ngenxa yokuba amanye amazwe okanye ethile musa ayikuvumeli ukungabandakanywa okanye umda lwemfanelo yomonakalo esisiphumo okanye ehamba, uxanduva lwethu iya kuncitshiswa kangangoko ubuninzi kuvumelekile kumthetho.
ICANDELO 14 - INDEMNITY
Uyavuma ukuba akhusele, siwukhusele kwaye akhusele Outilsdecuisine.com, wethu inkampani engumzali, iinkampani, amagatya, amaqabane, amagosa, abalawuli, ii-arhente, ikontrakhi, layisense, ababoneleli-nkonzo, ngezivumelwano, abathengisi, amava kunye abasebenzi ukuba naliphi na ibango okanye imfuno, kubandakanywa imirhumo abameli ezifanele ', eyenziwe naliphi na iqela lesithathu ngenxa okanye evela ukuhlukumeza kwakho ezi Terms of ukuthengiswa kunye Sebenzisa okanye amaxwebhu bayibiza leyo, okanye ukuphula kwakho nayiphi na umthetho okanye amalungelo omntu wesithathu.
ISIHLOKO 15 - UKUXHUMANA
Ukuba nawuphi na umqathango wale Conditions of ukuthengiswa kunye Sebenzisa uthathwa mthethweni, engento okanye ayinyanzeliswa, loo miqathango kunjalo kunyanzeliswa kangangoko evunyelwe ngumthetho kwaye hayi iqela esebenzayo ziya kuqwalaselwa ukuhlukana kwiMigqaliselo neMibandela yokuThengiswa kunye nokuSebenza, oku kuphazamiseka akuyi kuchaphazela ukuqinisekiswa nokusebenza kwazo zonke ezinye izibonelelo ezisele.
ICANDELO 16 - ISETYENZO
Imbopheleleko kunye namatyala aqhutywe ngamalungu phambi komhla wokuphela uya kuhlala esebenza emva kokupheliswa kwesi sivumelwano kuzo zonke iinjongo.
Le Miqathango neMibandela yokuThengiswa kunye nokuSebenza isebenza ngaphandle kokuba ize iphele okanye ingagqithwanga. Unokuphelisa le Migaqo neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenzisa nanini na ngokusitshela ukuba awunasifuni ukusebenzisa iiNkonzo zethu, okanye xa uyeka ukusebenzisa indawo yethu.
Ukuba isigqibo, ngokubona lwethu, uyasilela, okanye xa ukrokrela ukuba akakwazi ukuthobela imiqathango yale Conditions of ukuthengiswa kunye nokuSetyenziswa, nathi kwakhona ukusiphelisa esi siVumelwano nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso kuwe kusengaphambili kwaye uya kuhlala ubopheleleka kuyo yonke imali ehlawulwayo kwaye iquka usuku lokuphela, kunye / okanye sinokukukhanyela ukuba ufinyelele kwiNkonzo zethu (okanye nayiphi na inxalenye yalo ).
ISIHLOKO 17 - UKUVUMELWA KWAMANYE
Nasiphi na ukusilela kwethu ukusebenzisa okanye ukunyanzelisa nayiphi na ilungelo okanye ilungiselelo leMigqaliselo neMibandela yokuThengiswa kunye nokuSebenzi akufanele kubekho ukukhutshwa kwelo lungelo okanye ilungiselelo.
Le Migaqo neMeko yokuThengiswa okanye ukuSebenza okanye nayiphi na enye imigaqo-nkqubo okanye ukusebenza komthetho esiyishicilela kule sayithi okanye ngokubhekiselele kwiNkonzo yenza isivumelwano sonke kunye nesivumelwano phakathi kwakho kunye nokulawula kwakho ukusebenzisa Service and idlula lonke unxibelelwano, iziphakamiso kunye nezivumelwano, elidlulileyo nowangoku, ngomlomo okanye ngokubhaliweyo, phakathi kwethu nawe (kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho, naluphi na uhlobo lwangaphambili Terms of ukuthengiswa kunye Sebenzisa).
Naluphi na ukungaqondakali kokuchazwa kwezi Mimiselo eziPhezulu zokuThengiswa kunye nokuSebenzi akufuneki ukutolika kwintlungu ebhaliweyo.
ICANDELO 18 - UMTHETHO OSEBENZIWEYO
Le leMimiselo Jikelele kunye nokuSetyenziswa, kunye nasiphi na isivumelwano eyahlukileyo apho sinikeza Iinkonzo ziya kulawulwa kwaye zachazwa phantsi kwemithetho esebenzayo 22 Rue Neuve, VERNOU BRENNE ON, F, 37210, France.
ICANDELO 19 - AMENDLELA KWEEMITHETHO EZIKHONO NEMITHETHO YOKUTHENGA NOKUSEBENZISWA
Unokuqhagamshelana neyona ndlela yakutshanje yimiqathango jikelele yokuthengiswa kunye nokusetyenziswa nanini na kweli khasi.
Sigcina ilungelo, ngokuqonda kwethu kuphela, ukuhlaziywa, ukuguqula okanye ukubuyisela nayiphi na inxenye yale Migqaliselo yokuThengiswa kunye nokuSebenzisa ngokuthumela izibuyekezo kunye noshintsho kwiziko lethu. Kuwuxanduva lwakho ukutyelela indawo yethu rhoqo ukuze ubone ukuba ngaba kukho utshintsho olwenziweyo. Ukusetyenziswa kwakho ngokuqhubekayo okanye ukufikelela kwisayithi yethu emva kokupapashwa kwanoma yikuphi ukutshintshwa kwale Migomo neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenza kubandakanya ukwamkelwa kwezo zinguqulelo.
ICANDELO 20 - IINKCUKACHA
Imibuzo malunga neMigqaliselo neMeko yokuThengiswa kunye nokuSebenza kufuneka ithunyelwe kwi-cookware@gmail.com.